DFS oo wado qorsho loogu gurmanayo Soomaalida ku xayiran xadka Ukraine iyo Poland. – XAMAR POST
DFS oo wado qorsho loogu gurmanayo Soomaalida ku xayiran xadka Ukraine iyo Poland.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Serbia ayaa sheegtay in ay ku howlan tahay sidii loo samatabixin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka Ukraine isaga soo cararaya.
Safaaradda JFS ee Belgrade, iyada oo fulineysa tacliimaadka Wasaaradda Arrimaha Dibadda JFS, waxaa ay dadaal xoog leh u gashay sidii adeeg qunsuliyadeed loogu sameyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dagaalada Ukrain ka socda ay noloshoodu saameysay iyo sidii loo soo badbaadin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayirnaa xuduuda u dhaxaysa Ukraine iyo Poland.
Sidaa awgeed; Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgrade Serbia waxaa sharaf u ah in ay u howlgashay, hubiseyna badqabka muwaadiniinta kala ah:
1. Mustafe Cabdul Daahir oo ah arday ka yimid Degamadda Gaalkacyo ee Gobalka Mudug.
2. Cabdullaahi Xuseen Mursal oo ahaa aday kana yimid Degamadda Waaberi ee Gobalka Banaadir.
3. Anwar Axmed Aadan oo ahaa muwaadin deganaa Caasimadda dalka Ukraine ee Kyiv, Anwar wuxuu ka yimid Degamadda Yaaqshiid ee Gobalka Banaadir.
Hadaba, si waafaqsan Sharciga Shaqada Dibadda, Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgrade waxaa ay sii laba jibaareysaa dadaalka wadaniga ah ee lagu samata bixinayo muwadiniinteena uu dagaalka Ukrain saameeyay.
Dalka Ukraine, waxaa ku go,doosan dad badan oo iskugu jira kuwa u dhashay dalkaas iyo kuwa Ajaanib ah oo ay ku jiraan Soomaali badan oo dalkaas u joogay howllo waxbarasho iyo kuwa kasii tahriibayay, waxaana haatan muuqato dadaal xoogleh oo ay Dowladda Soomaaliya galineyso sidii ay usoo samatabixin lahayd muwaadiniinteeda dalkaa ku xayiran.
RW Rooble oo faray Taleyaasha Ciidamada iyo Saraakiisha AMISOM adkeynta Amniga Muqdisho